Isaphulelo Isikhathi - iTianjin Panda Technology Group Co, Ltd
IMIKHUMBUZO YOKULANDELA KWAMAKHAYA amasha
Ngemuva kokushintsha umphakeli, uma umphakeli woqobo ehluleka ukwenza insizakalo ethengiswa emva kokuthengisa, sizimisele ukwenza insizakalo ngemuva kokuthengisa ngesikhathi sewaranti ngenxa yokuthi isikhathi sewaranti asilikhiphi.
IMISEBENZI YOKULUNGISELELA YAMAKHAYA AMAHLE
Intengo ekhethiweyo, ukukhiqizwa okuphambili, ukuhlolwa njalo, umbiko wokuhlaziywa kwemakethe wonyaka.
INKONZO YOKUQINISEKISA UKUQHAWULA
Ngaphezu kokuhlukumeza, ushintsho, ingozi, ukufakwa okungalungile nezinye izinto ezibangelwa ukulimala kwezesekeli, iwaranti yozimele yeminyaka emithathu, ezinye izingxenye iwaranti izinyanga eziyisithupha.
INKONZO EBONAKALAYO YEMISEBENZI EHLE
Umthengisi uzohlinzeka umthengi mahhala 3 % zezinto ezigqokile lapho kuhanjiswa izimpahla, njengamathayi, ukudayela okungasemuva, isikulufa namantongomane, izinyawo, noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende
1.Sinikeza izixazululo ezinhle kakhulu nemikhiqizo engcono kakhulu yokuqinisekisa izidingo zabathengi.
2. Singakwazi ukuhlela izisebenzi eziqeqeshiwe kakhulu kwezobuchwepheshe ukusiza abathengi.
3. nganoma yisiphi isikhathi, izokwazisa masinyane ezobuchwepheshe ukusiza abathengi.
EMVA KOKUSETYENZISWA KWENKONZO
1. Uma kukhona noma iyiphi inkinga esezingeni lezimpahla ozitholile, noma izimpahla zithunyelwa ngephutha noma ziphuthelwe ngenxa yezizathu zomthengisi, uma izimpahla zingaphandle kwesitoko ngenxa yokushoda kwezingxenye ezimakethe, xoxisana nekhasimende ngembuyiselo noma esikhundleni sezinye izingxenye.
2.Sizohlinzeka ngezinsimbi zamahhala nganoma yimuphi umonakalo odalwe yizinto ezingezona ezabantu phakathi nezinsuku eziyi-7 ngemuva kokuthola izimpahla.
3.Uma izingxenye zingonakalisiwe ngenxa yezici zabantu, singakwazi ukunikeza izingxenye ezikhokhelwayo ngokuya ngentengo yemakethe.
4.Ngesikhathi sewaranti, uma ifreyimu ingasasebenzi noma ibhayisekili lingasebenzi kahle ngisho nangezinye izingxenye zokuphindisela, sizothumela kabusha ibhayisekili elisha.
I-Hot Mountain Bike , I-Mountain Bike , I-Mountain Bike Evela EChina , Bikey Mountain Bike , Izingane Ibhalansi Bike , Isikebhe Samafutha Esikebhe Sentaba i-Fat Tire ,